Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọgwụ mgbochi ọnụ na-enweta nkwado ugbu a
Mayne Pharma Group Limited na Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA) kwuputara Therapeutic Goods Administration (TGA) akwadola akwụkwọ akụkọ jikọtara ọgwụ mgbochi ọnụ NEXTSTELLIS® (14.2 mg estetrol na 3 mg mbadamba drospirenone). Mayne Pharma na-atụ anya mmalite azụmahịa nke NEXTSTELLIS n'etiti 2022 nke agụmakwụkwọ ahịa ọkachamara ahụike kwadoro site na Jenụwarị 2022.
N'ịbụ nke Mithra Pharmaceuticals mepụtara, NEXTSTELLIS bụ ọgwụ mgbochi afọ nke mbụ nke nwere mmetụta ọhụrụ estrogen dị ala - estetrol (E4) na progestin - drospirenone (DRSP). E4 bụ estrogen sitere n'okike nke ahụ mmadụ na-emepụta n'oge ime ime, nke sitere na isi ihe ọkụkụ ugbu a. N'ime ihe ọhụrụ kemịkalụ (NCE), NEXTSTELLIS ga-enweta afọ 5 nke mwepu ahịa.
A na-eji ahịa mgbochi mgbochi ime Australia ọnụ ahịa na $125 nde yana ahịa mgbochi mgbochi ọnụ nke ọnụ na-eme mkpụmkpụ (estrogen na progestin) ruru ihe karịrị nde $65.
Onye isi oche nke Mayne Pharma Mr Scott Richards kwuru: “Obi dị anyị ụtọ na-ewebata NEXTSTELLIS n'ahịa Australia. Ọ bụ afọ 10 kemgbe ụmụ nwanyị Australia nwere hormone mgbochi mgbochi ọhụrụ ka ha na dọkịta ha tụlee. NEXTSTELLIS na-enye ọgwụ dị irè, nchekwa na nke a na-anabata nke ọma yana njikwa okirikiri mara mma ma gosipụtala mmetụta dị ala na akụkụ ụfọdụ nke ahụ. Mayne Pharma na-agba mbọ na ahụike ụmụ nwanyị na ịmalite ngwaahịa ọhụrụ iji gboo mkpa ụmụ nwanyị Australia na America. "
Dọkịta na-ahụ maka ahụike mmekọahụ, Dr Terri Foran, kwuru, sị: “Mgbochi mgbochi ọnụ ọnụ na-aga n'ihu na-abụ ụzọ a na-ejikarị achịkwa ọmụmụ hormonal n'Australia na onye ọ bụla na-ahụ maka ụlọ ọgwụ maara na nwanyị ọ bụla na-emeghachi omume n'ụzọ dị iche na homonụ na-egbochi afọ ime. Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ mgbochi mgbochi ka anyị nwee ike ịhazi nhọrọ ahụ n'otu n'otu. Taa, anyị nwere ọtụtụ progestins dị, mana nhọrọ nke estrogen ejedebere na ethinylestradiol ma ọ bụ estradiol. Inwe estrogen ọzọ, estetrol (E4), na-emepe ohere na ọtụtụ ụmụ nwanyị ga-enwe ike ịchọta ngwakọta nke dabara ha. Nnyocha na-egosi na estetrol na-ahọrọ karịa na mmetụta ya na anụ ahụ dị iche iche na-anabata hormonal na ahụ nwanyị. Ọ bụ ezie na ọ nwere mmetụta ndị ọ chọrọ na sistemu genital dị mkpa maka ọgwụ mgbochi ọnụ nke ọma, ọ dị ka ọ nweghị mmetụta dị ntakịrị na imeju na ara.”
Onye isi Mithra's Mr Leon Van Rompay kwuru, sị: “Mgbe US, Canada na Europe gachara, anyị nwere obi ụtọ ịnata nkwado ọzọ maka mgbochi afọ ime anyị, na-akwado mmalite azụmahịa na kọntinent nke atọ. Nnukwu nkwenye nke anọ a nwetara n'afọ a, dabara nke ọma na nhazi oge anyị, na-enye anyị ohere ikpuchi ihe karịrị 80% nke mpaghara ezubere iche. Nke a na-egosipụtakwa nka siri ike nke ndị otu anyị na ike nke mmekorita anyị na Mayne Pharma, nke na-eme ka mmalite azụmahịa NEXTSTELLIS bụrụ ihe kacha mkpa."